Momba anay - Hangzhou Realy Tech Co., Ltd.
TENAmanana tobim-pampandrosoana voatokana manana dobo siantifika efa za-draharaha izay manolo-tena amin'ny fampandrosoana ny IVD Reagents. Ny mpahay siansa R&D dia mirotsaka amin'ny fampandrosoana ny dingana, ny fanatsarana ny dingana, ny famolavolana ary ny fampandrosoana famakafakana. Ny fantsom-pampandrosoana ny vokatray dia misy ny reagent de detection quantitative chemiluminescence, reagents detection quantitative gold colloidal, antigène isan-karazany ary antibody. Ity trano ity dia eken'ny Fitondram-panjakana momba ny sakafo sy ny zava-mahadomelina, Governemanta Shina.
Ny REALY dia manan-danja lehibe amin'ny fitazonana ny fanaraha-maso henjana amin'ny kalitao, amin'ny dingana rehetra amin'ny fizotrany, ary amin'ny vokatra sy ny fomba fitantanana manerana ny tranony rehetra sy manerana ny fikambanana. Ny fiarovana ny vokatray dia voamarina, amin'ny alàlan'ny fitsapana be dia be, ny santionany ary ny fomba fanamarinana, mba hifanaraka amin'ny famaritana vokatra farany.
Isan-taona dia mandray anjara amin'ny fampisehoana ara-pitsaboana any amin'ny firenena samihafa toy ny Medlab, Medica ary AACC sns izahay. Nahazo mari-pankasitrahana CE, fanamarinana rafitra kalitao ISO 13485, fahazoan-dàlana amin'ny famokarana, fanomezan-dàlana ara-barotra any amin'ny firenena niaviany. Manomana FDA sy mari-pankasitrahana hafa koa izahay. Ny tambajotran'ny varotra Real Tech dia nandrakotra firenena sy faritra 80 mahery, manome fahafahana mampientam-po amin'ny fizarana vokatra tsara amin'ny vidiny tena mifaninana. Nahazo laza tsara eran'izao tontolo izao izahay noho ny vokatra tsara sy ny serivisy matihanina.
Nanokan-tena hanao izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa izahay amin'ny fanomezana ny olona vokatra sy serivisy avo lenta.
Hangzhou Realy Tech Co., Ltd.Niorina tamin'ny taona 2015. Izy io dia orinasa In-Vitro Diagnostic manana foibe ary miasa eran'izao tontolo izao, manokana amin'ny fitsapana momba ny fitsaboana sy ny rafitra Immunoassay nandritra ny 5 taona mahery. Ny orinasa dia mipetraka eo amin'ny valan-javaboary siantifika 6000 metatra toradroa ary manana fitaovana R&D sy famokarana manara-penitra.
Ny tsipika vokatra midadasika dia misy ny Fitsapana haingana, mpamaky fitsapana zava-mahadomelina, mpamaky POCT, ary milina rafitra Chemiluminescence Immunoassay mandeha ho azy. Ireo rafitra rehetra ireo dia mifanaraka amin'ny fitadiavana karazana marika fiarovana 150 eo ho eo, zavatra fisavana manarona ny aretim-po, areti-mifindra, aretina hepatita, diabeta, fitsirihana ara-pahasalamana sy sampana fiterahana ary sehatra hafa. Tsy mety amin'ny fitiliana haingana ny aretina mafy any amin'ny hopitaly sy laboratoara lehibe sy antonony, fa mety koa amin'ny famakafakana fatran'ny immunological feno amin'ny hopitaly sy laboratoara kely sy antonony.
Ny orinasa natsangana tamin'ny alàlan'ny fanamarinana momba ny fitantanana sakafo sy zava-mahadomelina amin'ny atrikasa madio ary atrikasa efa ho 700 ㎡. Ny vokatra isan'andro amin'ny dosie 100000, miaraka amin'ny kitapo diagnostika in vitro sy ny fahaiza-mamokatra milina fitiliana klinika, ankoatra ny vokatra marika manokana, dia manome serivisy OEM ho an'ny mpanjifa ihany koa izahay, hitsidika rafitra, tsena OTC, ministeran'ny filaminam-bahoaka ary sampan-draharaha fisorohana ny areti-mifindra dia manome isan-karazany ny famaritana ny vokatra. Ny vokatra dia mivarotra amin'ny tsena lavitra tsena anatiny sy ivelany.
Ny serivisy tsara sy ny kalitao azo antoka dia manampy antsika hahazo laza maneran-tany, ohatra:
1. Kolombia, Brezila, Meksika, Ekoatera, Chile, Però...
2. Polonina, Espaina, Frantsa, Rosia…
3. Japon, Filipina, Malezia, Aostralia…
4. Afrika Atsimo, Venezoela, Somalia, Kazakhstan…
5. Ary firenena hafa
Tena ankasitrahana izany raha afaka mifandray aminay ianao raha mila fanazavana fanampiny momba ny orinasa sy ny vokatra. Tongasoa eto amin'ny fiaraha-miasa aminay amin'ny OEM.